गुड लक विसले मिलाएको जोडी - दम्पती - नारी
गुड लक विसले मिलाएको जोडी
असार ७, २०७५
डा.ओममूर्ति अनिलको विवाह ६ वर्षअघि बनेपाकी मनीषा वैदारसँग भएको थियो । डा. अनिलको बनेपाको नेवार समुदायकी एक्ली छोरी मनीषासँग विवाह हुँदा सुरुमा केही अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुप¥यो । नेवार समुदाय, त्यसमा पनि एक्ली छोरीको विवाह अर्कै जातसँग हुने कुरा सुनेर मनीषाका अभिभावकले सुरुमा ग्रिन सिग्नल नदिए पनि डा. अनिलसँग पहिलेदेखि नै चिनजान भएकाले ती कुरा गौण हुन पुगे । डा. अनिलले मनीषाका बुवा तथा आमाको उपचार गरेकाले सम्बन्ध बिस्तार सहज भयो ।
कामको सिलसिलामा डा. अनिल तथा मनीषाको भेट शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा भएको थियो । मनीषा शिक्षण अस्पतालमा नर्सका रूपमा कार्यरत थिइन् । ड्युटीकै क्रममा चिनजान भएका उनीहरू अस्पतालमा हुँदा काममा मात्र केन्द्रित हुन्थे । एक समय डा. अनिलको परीक्षा चलिरहेको थियो । त्यतिबेला मनीषाले ‘बेस्ट अफ लक’ भनेर विस गरेपछि मात्र उनीहरूको सम्बन्धले बे्रक थ्रु पायो । उक्त शुभकामना ओमको जीवनमा ग्रिन सिग्नलका रूपमा देखाप¥यो । डा. अनिलको सरलता, काम प्रतिको रुचि एवं इमान्दारिता देखेर नै मनीषा प्रभावित भएकी थिइन् । यसैगरी डा. अनिल पनि मनीषाको सत्यता, इमान्दारिता एवं सरल व्यवहारबाट प्रभावित थिए ।
केही समय शिक्षण अस्पतालमा काम गरेपछि डा.अनिल थप अध्ययन (डिएम) का लागि दिल्ली गए । त्यो समयमा उनीहरूबीच फोनमा कुराकानी हुन्थ्यो । डा. अनिल पढ्न तथा मनीषा काममा व्यस्त भएकाले प्रेमसम्बन्धी कुरा त्यतिबेला खासै नभएको उनीहरू बताउँछन् ।
डा. अनिल नेपाल आएका बेला उनीहरू भेटघाट गर्थे । त्यतिबेला घुम्न कतै टाढा जाँदा कसैले देख्ने हो कि भन्ने चिन्ता डा. अनिललाई हुन्थ्यो, त्यसैले उनीहरू नजिकैको रेस्टुराँमा पुग्थे । विवाह गर्ने समयमा मनीषाले शिक्षण अस्पतालको जागिर छोडिन् । अहिले मनीषा आफ्नी दुई वर्षीया छोरीको स्याहार गरेर दिन बिताउ“छिन् भने परिआएका बेला मोडर्न हर्ट क्लिनिकलाई समय दिन्छिन् । छोरी हुर्किएपछि कामलाई निन्तरता दिने उनको योजना छ ।
विवाह तथा हनिमुन
डा. अनिल तथा मनीषाको विवाह जनकपुरको एक होटलमा भएको थियो । नेवारी तथा मैथिली दुवै संस्कृतिअनुसार उनीहरूको विवाह सम्पन्न गरियो । नेवार संस्कृतिमा विवाहका बेला सुपारी दिने चलन छ । त्यही चलनअनुसार आफ्नो विवाह भएको मनीषा बताउँछिन् । विवाहको पर्सिपल्टै हनिमुनका लागि उनीहरू दिल्ली तथा गोवातर्फ लागेका थिए ।
चिकित्सकको पेसा अनि परिवारलाई समय
मुटुरोग विशेषज्ञ डा.अनिल बिहान ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल तथा दिउँसो महाराजगन्जस्थित मोडर्न हर्ट क्लिनिकमा व्यस्त रहन्छन् । दिउँसो एक घन्टा समय बच्छ । उक्त समय उनी आफ्नो परिवार तथा २ वर्षीया छोरीसँग बिताउँछन् ।चिकित्सकका लागि पेसा तथा सामाजिक उत्तरदायित्व परिवारभन्दा माथि हुने डा. अनिल बताउँछन् । घरमा परिवार बिरामी हुँदा अथवा आफू बिरामी हुँदा पनि सबै कुरा छोडेर बिरामीको उपचारमा लाग्छन् उनी । आफ्नो पेसाप्रतिको उत्तरदायित्व बहनका कारण धेरै पारिवारिक पार्टी तथा कार्यक्रममा जान नपाएको अनुभव डा. अनिलसँग छ तर त्यसप्रति उनलाई कुनै गुनासो छैन ।
खाना पकाउन रुचि
अन्य दिनमा काम गर्नेले खाना बनाए पनि चाडपर्व तथा बिदाका दिन भने डा. अनिल आफैं खाना बनाउन अग्रसर हुन्छन् । युटुब हेरेर खाना पकाउने डा. अनिलले बनाएका परिकार स्वादिला हुने मनीषा बताउँछिन् । बिदाका दिन उनी शाकाहारी तथा मांसाहारी दुवै थरीका परिकार तयार पार्छन् । डा. अनिलले पकाउने मटन करी विशेष स्वादिलो हुने मनीषाले बताइन् ।
मन पर्ने / मन नपर्ने पक्ष
डा.अनिललाई मनीषाको छिट्टै रिसाइहाल्ने तथा कहिलेकाहीँ मिसअन्डरस्ट्यान्ड गर्ने बानी मन पर्दैन । त्यसैगरी मनीषालाई डा. अनिलको रिसाहा स्वभाव मन पर्दैन । यद्यपि उनीहरूको रिस क्षणिक हुन्छ । त्यस्तो स्थितिमा दुई घन्टामै बोलचाल हुने उनीहरूले बताए । डा. अनिलको अनुहार हेर्नासाथ रिस क्षणभरमै शान्त हुने मनीषा बताउ“छिन् । डा. अनिललाई मनीषाको केयरिङ स्वभाव मन पर्छ भने मनीषालाई डा. अनिलको खुल्ला विचार मन पर्छ ।
पहिरन तथा उपहार
डा. अनिल तथा मनीषा कार्यक्रमका सिलसिलामा दिल्ली गैरहन्छन् । त्यहाँ उनीहरू आफूलाई चाहिने पहिरन खरिद गर्छन् । मनीषालाई आफ्ना लागि पहिरन छान्न द्विविधा हुने भएकाले उनका लागि डा. अनिलले नै पहिरन छनोट गरिदिन्छन् । डा. अनिलले म्यारिज एनिभर्सरी अथवा त्यस्ता अरू उत्सवमा खासै उपहार दिने गरेका छैनन् । मनीषाले भने गत वर्षको म्यारिज एनिभर्सरीमा डा. अनिललाई औंठी उपहार प्रदान गरेकी थिइन् ।
विवाह सामाजिक सम्बन्ध हो । विवाह दुई भिन्न परिवार, संस्कृति तथा परिवेशको मिलन पनि हो । दुवैले एक–अर्काको संस्कृति तथा परिवेश बुझेर परिवारको मान–मर्यादा कायम राख्नुपर्ने धारणा यो दम्पतीको छ । उनीहरू भन्छन्–एक–अर्काको परिवारलाई उँचनिचको भावनाले हेर्नुहुँदैन । दुवैको संस्कारको राम्रो कुरा ग्रहण गर्ने र विभेदकारी कुरा छोड्न सक्नुपर्छ । यति गरे सम्बन्धमा समस्या सिर्जना हुन पाउँदैन । यस्ता दम्पती घरका सबै सदस्य तथा बाहिरी वातावरणसँग छिटो घुलमिल हुन सके वैवाहिक सम्बन्ध सुमधुर रहन्छ ।
चैत्र ८, २०७४ - विना संघर्ष मिलेको जोडी
चैत्र ७, २०७४ - साइबरले जोडेको ज्ञानेन्द्र र संगीता को जोडी
फाल्गुन २१, २०७४ - एउटै क्षेत्रमा रमेका जोडी
माघ १६, २०७४ - विपरीत रुचिमा रमाएको जोडी मेघा र पारस
पुस २३, २०७४ - एक–अर्काको प्रेममा मग्न मल्होत्रा जोडी
मंसिर २४, २०७४ - बाइक राइडर जोडी दीपेश र मेरिना
थप केही दम्पतीबाट
धर्मले नछेकेको प्रेम माघ ५, २०७८
भिन्न परिवेशका जोडी श्रावण २१, २०७८
हामी एक–अर्काका बल हौं जेष्ठ ७, २०७८
सन्न्यासीको भ्यालेन्टाइन फाल्गुन २, २०७७
स्मार्ट चिकित्सक जोडी माघ ५, २०७७
दाम्पत्यमा सामाजिक सञ्जालको असर फाल्गुन १४, २०७६